သင်၏ပျင်းစရာကောင်းသည့် ZOOM ခေါ်ဆိုမှုသည်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည် - သတင်း
သင်၏ပျင်းစရာကောင်းသည့် Zoom ခေါ်ဆိုမှုသည်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်
သင်တို့ထဲက 1500 ကျော်အရူးအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်တ ဦး တည်း Edinburgh ရဲ့အပူဆုံးပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မဲပေးပေမယ့်ဝေးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ လေးကိုလေးပတ်ပါ၊ BNOCs နှစ်ခုပတ်လည်တွင်စင်မြင့်သို့သွားရန်အချိန်ယူပါ။
Angelina Malcher, 3rd နှစ်, ဆေးပညာ
Angelina သည် Edinburgh nightlife မြင်ကွင်းကိုသူစိမ်းတစ်ယောက်မဟုတ်၊ သူမရဲ့သူငယ်ချင်းများက 'ပတ် ၀ န်းကျင်အဓိကရုဏ်း' အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားလူများကသူမကို 'လူတိုင်း၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း' အဖြစ်သိကြသည်။ သင်ရွေးသည် ဒါပေမယ့်သူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်နှစ်ခုအမည်စာရင်းတင်သွင်းများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဖွင့်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သူမသည်မြို့တော်၌နေထိုင်နေထိုင် Glasgow ရဲ့အကောင်းဆုံးသော၏ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာပါပဲ။ သူမသည် 'bouncer's အဆိုးဆုံးအိပ်မက်ဆိုး' လည်းဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာနောက်ထပ်မေးခွန်းများကိုမမေး ...
Angelina သည်နာမည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ၊ သူသည် Edinburgh ပတ်ပတ်လည်၌မျက်နှာရှိသည်။ သူမ ၂၄ နာရီအတွင်း Big Cheese bouncers နှစ်ခုအတွက်ရွေးချယ်မည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းဖြစ်သည်။ သူမ၏နှုတ်ခမ်းတံဆိပ်ခတ်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်သူကမှန်လျှင်, သူမ ဒဏ္’sာရီ ပါပဲ။
Sean O'Reilly, 4th နှစ်, ဆေးပညာ
အခုဒီကောင်လေးက icon တစ်ခုပဲ။ သူကဆေးပညာအတွက်နာမည်ကြီးဖြစ်ပါသည်, သူသည်ဆယ်ကျော်သက်ကင်ဆာ Trust ၏အကူအညီအတွက်နှစ်စဉ်ဆေးဝါး '' ထုတ်ဖော်၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးတစ် ဦး ပါပဲ။ Medics 'Reveal သည်စည်းဝေးပွဲခန်းမများ၌ကျင်းပသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကစီစဉ်ထားသောနှင့်လုံးလုံးလျားလျားသီဆိုထားသည့်အမျိုးမျိုးသောအဝတ်အစားပြပွဲဖြစ်သည်။
Sean သည် BNOC အတွက်သာမက၎င်းသည်လက်လေးခုရှိ VK များပါသည့်ကြီးမားသောဒိန်ခဲကိုလက်လွတ်မသွားပါ။ အိုး, သူသည်ဤသူအကြိမ်ပေါင်းများစွာထွက်ကန်ခဲ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း topless ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကြောင်းမလုံလောက်လျှင်အဖြစ်, ဒီမှာသင့်အတွက်အပိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပါပဲ။ Sean သည်အစကန ဦး တွင်ရယ်စရာအဖြစ် Naked Attraction ကိုလျှောက်ခဲ့သော်လည်းမကြာမီပင် uni နှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်တွင်ထုတ်လုပ်သူများထံဖုန်းဆက်သည်။ သူကသူကသူလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်အဆင့်မှလုပ်င်ကြောင်းကိုသိစေ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မတိုင်မီညဥ့်ကနေအရက်မူးနှင့်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့၌တောင်စောင်းကနေနှင်းလျှောစီးတစ်ဝက်ဆုံးရှုံးရာမှစုံတွဲတစ်တွဲ၏စုံတွဲတစ်တွဲခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်သူတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးနှင့်အတူသွားလေ၏။ သူကဝမ်းနည်းစွာ COVID-19 နှင့်အတူဖျက်သိမ်းတယ်တဲ့သူချွတ်ရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်ရသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခ, ပါဝင်သောလာမည့်ပတ်ပတ်လည်မှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူ့ကိုသိလဲ၊ မကြာခင်မှာသူစီးရီးအသစ်မှာသူ့ကိုတွေ့မယ်။
ခရစ္စတိုဖာ Goodall, 2nd နှစ်, အားကစားသိပ္ပံ
Next ကိုတက်ကျနော်တို့ခရစ္စတိုဖာရရှိပါသည်။ သူသည်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်နှင့်အညီ, တိုင်းအားကစားကလပ်အတွက်ဒေသခံကောင်းတဲ့ကောင်လေးပါပဲ။ ရပ်ဂ်ဘီ၊ မျက်နှာတောင်၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ သူကသင်ပြောစေခြင်းငှါ, များစွာသော pies နှင့်အရသာ၌သူ၏လက်ချောင်းတယ်ရဲ့လား လူကြိုက်များမှု၏ချိုမြိန်အရသာ။
ခရစ္စတိုဖာသည်ပတ်ပတ်လည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ပါတီပွဲတစ်ခုတွင်တွေ့ဆုံခဲ့သောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စကားပြောနေစဉ်သူသည်လူ ၆ ယောက်ချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုစားဖူးသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ငါအစဉ်အမြဲငါတ ဦး တည်းကိုမြင်ရလျှင်ယခုဆွဲဆောင်ရိုနှင့်ပုလ်၏အစစ်အမှန် display ကိုရှိပါတယ်။
Dhilan Patel, ပထမနှစ်, ဥပဒေနှင့်စီးပွားရေး
Dhilan သည် Edinburgh တွင်ပိုလန်နှင့်ပိုလိုလော့၌မိမိကိုယ်ကိုနာမည်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးနှစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Dhilan Patel ရဲ့အဓိပတိစားစရာခန်းထဲမှာင်မဟုတ်လျှင်ဒါဟာ pres မဟုတ်ပါဘူး။ အိုး၊ သင်အနည်းဆုံးလူ ၁၀၀ ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုသင်အာမခံနိုင်သည်။
Dhilan ရဲ့ဂုဏ်သတင်းသည်သူ၏ကြီးမားသောကြိုတင်သောက်စရာပါတီများထက်ကျော်လွန်တတ်၏။ သူကအတော်လေးမင်းသမီးလူပဲ! ပျမ်းမျှတနင်္လာနေ့ညသည် Dhuj ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့် Jujus တွင်နောက်ထပ်ရိုင်းစိုင်းသောညတစ်ညဖြစ်လာသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်က Jujus ဟာအချိန်ဖြုန်းတီးတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူ့ Chancellors ခန်းထဲမှာပျော်စရာကောင်းအောင်ပြန်ပါ။ သူ၏တနင်္လာနေ့ညနေခင်းချစ်သူသည်ပျော်ရွှင်စွာ၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာအိပ်ပျော်သွားသည်။ ညဥ့်သန်းခေါင်ယံ၌ပင်သူသည်အခြားဆွဲယူမှုတစ်ခုအတွက် Jujus သို့ပြန်သွားခဲ့သည်ကိုသိရန်သာအိပ်ရာထဲမှထခဲ့သည်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်!
ဝီလျံဟွမ်၊ ပထမနှစ်၊ စီးပွားရေးနှင့်သမိုင်း
အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင် '' မီးခိုးရောင် Goose ဗော့ဒ်ကာပုလင်းနှင့်အတူကောင်လေး '' အဖြစ်တစ်ပတ်၏ clubbers ၌သူ၏မျိုးစုံပွဲကနေဝီလျံကိုအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။ သူကဒီတစ်နှစ်လုံးကိုတ ဦး တည်းလက်လွတ်မပြုခဲ့ရေခဲပြင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ဦး ခေါင်း PR ပါပဲ! Will သည် clubbing နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝဘာသာရေးဖြစ်သည်။
တစ်ထိုးနှက်အလုပ် givw ဖို့ဘယ်လို
၄ င်းတို့လေးနှစ်တာကာလအတွင်းဝီသည် Edi ကျောင်းသားများထက်ပိုပြီးကလပ်များသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါ sesh မှဒီအပျနှံတိကျတဲ့ skillset လိုအပ်သည်။ မိမိအထင်ရှားသောလတ်ဆတ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သူကကလပ်ကနေလာနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုနံနက်များအတွက်ကြောင့်အက်ဆေးရေးသားခြင်းမှာအမြဲတမ်းနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Snax မှာမနက်လည်စာနှင့်အတူကျင်းပမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာရဲ့။ ထူးခြားသည်မှာသူသည် Rascals တွင် clubbing လုပ်ပြီးနောက် ၆ နာရီခန့်ကြာသည့်အထိစာစီစာကုံး ၁၅၀၀ စကားလုံးကိုခြစ်ရာမှရေးသားခဲ့သည်။ မင်းရဲ့နည်းလမ်းတွေကို Will သင်ပေးပါ။
ယခုအချိန်အထိအဆိုပါ caliber အားဖြင့်အထင်ကြီး? အမည်စာရင်းတင်သွင်းနေတုန်းပဲ ဒီမှာ!